'Ahụtụbeghị m na oge ịkụ ihe ahụ adịwo ogologo' - Potatoes News
'Ahụtụbeghị m na oge ịkụ ihe were ogologo oge'
Na ngwụcha ọnwa Machị, poteto izizi sitere na onye ọrụ ugbo na-akọ ugbo Ben Minkhorst si Hummelo (GD) bara n’ime ala. N'ihi mmiri mmiri ahụ, akụghị poteto ikpeazụ ruo mgbe ngwụcha Mee. Enwekwara otutu mmiri ozuzo na gburugburu 17 Mee, na-ebute ide mmiri.
Oghere efu dị na nduku nduku bụ nsonaazụ nke idei mmiri nke onye ọrụ ugbo na-amị mkpụrụ Ben Minkhorst si Hummelo nwere nsogbu na May nke afọ a.
M ga-aghọta na enwekwaghị ezigbo nduku na nke a, Ben Minkhorst nke ugbo ugbo ara Minkhorst na-ekwu. “Echere m na idei mmiri rikpuru anyị n’ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ hectare 50 nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ hectare 250. Ihe dịkwa ka ụzọ ise nke acreage ahụ rere ure. ”
Ọ na - ewepụta ekwentị ya wee gosi vidiyo ọ mere nke otu n'ime mpaghara nduku ya mgbe ọdịda mmiri nke 17 May. Ọ nwere ike hụrụ na na ala akụkụ nke ibé mmiri dị n'etiti nduku ridges. N'ebe ole na ole na ridges ọbụna na-apụ n'anya kpamkpam n'okpuru mmiri. “N’ụbọchị abụọ, ihe dịka milimita 55 dara. Karịsịa, ibé ala ndị a kụrụ ma milled enweghị ike ịhazi mmiri nke ọma. Anyị enwetabeghị ka anyị na-egwu olulu, nke anyị na-arụkarị dị ka ọkọlọtọ. ” Mgbe mmiri ozuzo ahụ gasịrị, Minkhorst na ndị ọrụ ya jiri aka ha gwuru olulu ruo ọtụtụ ụbọchị iji kpochapụ oke mmiri dị ka o kwere mee ma gbochie mmebi ọzọ.
Onye ọrụ ugbo na-amị mkpụrụ Hummelose anaghị eju ya anya site na mmiri ole na ole. Ọ bụghị n’efu ka ọ na-egwupụta ọwa mmiri ndị dị n’uche ya. Ọ na-eche na ọ bụ naanị ezi uche dị na ya na nduku na-eto eto na-esonyere ndọghachi azụ. “Ọ bụ utopia na ọ nweghị ihe ga-emebi hectare 250. Have ga-anọrịrị n'eziokwu, "ka Minkhorst na-ekwu. “Kwa afọ bụ afọ pụrụ iche, mana 2021 bụ 'otu n'ime puku puku'. N'ihi mmiri mmiri anyị ka na-akụ na 20 Mee. Adị m afọ iri ise na atọ ugbu a, ahụbeghịkwa m oge ịkụ ihe n’oge dị anya. Nọmalị anyị na-a kacha nke anọ izu. Akụkụ akụkụ ala ahụ erebasịworịị bụkwa ihe ọhụrụ nye m. ”
Gụọ akụkọ zuru ezu na Vee & Gewas nke Saturday 3 July. Abụghị onye debanyere aha? Rịọ nọmba ikpe n'efu Ebe a .
'Nog niet eerder meegemaakt dat het pootseizoen zo lang duurde' 'ọ bụrụ na ị chọrọ,
Tags: ihu igwe-eto etougbo ndukuakuku nduku
Ọnụ ahịa nduku na Germany dara na June 2021
Ndị na -emepụta nduku nke ọrịa na -efe efe na Saịprọs na -echesi ike maka nkwụghachi ụgwọ
N'afọ 2020, Germany bụ onye na -emepụta nduku kacha ibu na European Union
Poteto UK, n'ọchịchọ dị elu mgbe idei mmiri metụrụ ndị na -akọ ahịhịa na Europe
Ụlọ ọrụ James Hutton na -atụpụta 'Hub Innovation Hub' nke dị na Scotland
Peruvian poteto: US, EU & Bolivia bụ ebe kachasị mkpa
Ele maka emighị emi ịkọ n'oge opupu ihe ubi na ụrọ dị arọ